सेयर बजार – Page3– Banking Khabar
सुधीर बस्नेतकी श्रीमतीको नाममा रहेको सेयर लिलामीमा
बैंकिङ खबर । ओरेन्टल कोअपरेटिभ संस्थाका तत्कालिन दुई कर्मचारीहरु नितु थापा बस्नेत र राजेश श्रेष्ठको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको सेयर जफत गरी लिलाम विक्री सुरु गरिएको छ । ओरेन्टल सहकारीका बचतकर्तालाई बितरण गर्नका लागि उक्त सेयर लिलामीमा निकालिएको हो …
सेयर बजार २.२९ ले बढेर १,१७९.३६ अंकमा पुग्यो
बैंकिङ खबर । सेयर बजार २.२९ अंकले बढेर १,१७९.३६ अंकमा कायम भएको छ । फाइनान्स र अन्य बाहेक सबै उपसुचक बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै उत्पादनमुलक १२.५७ अंकले बढेको छ । दिनभरिमा १६६ वटा कम्पनीको १५ लाख १३ हजार नौ …
कमजोर रेटिङ भएका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न नपाउने
बैंकिङ खबर । नेपाल धितोपत्र बोर्डले कमजोर रेटिङ भएका कम्पनीहरूले आइपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले पुँजी बजार सुधार र विस्तारका लागि आवश्यक संशोधित नीति नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । जसअनुसार, अब रेटिङ संस्थाबाट न्यून ग्रेड वा …
सेयर बजारमा सामान्य अंकको गिरावट, ३४ करोडमाथिको कारोबार
बैंकिङ खबर । मङगलबार सेयर बजार ०.४० अंकले घटेर १,१७७.०७ अंकमा कायम भएको छ । विकास बैंक, उत्पादनमुलक, अन्य र माइक्रोफाइनान्स बाहेकका सबै उपसुचकहरु घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै ३८.१३ अंकले निर्जीवन बीमा समुह घटेको छ । दिनभरिमा १६० वटा …
६.६७ अंकको वृद्धिसँगै ११७७.४६ अंकमा सेयर बजार
बैंकिङ खबर । सोमबार सेयर बजार ६.६७ अंकले बढेर ११७७.४६ अंकमा पुगेको छ । उत्पादनमूलक र अन्यबाहेक सबै उपसूचक बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै जीवन बीमा ९२.६९ अंकले बढेको छ । १४८ वटा कम्पनीको नौ लाख १४ हजार दुई सय …
बैंकको सेयरमा लगानी बढाउँदै नागरिक लगानी कोष
बैंकिङ खबर । नागरिक लगानी कोषलाई स्टक मार्केट डिलरको रुपमा अघि बढाइने भएसँगै कोषले यतिबेला बैंकहरुको सेयरमा लगानी बढाउन थालेको छ। कोषले लिलामी सेयरलाई प्राथमिकता दिँदै एनसिसी बैंकको सबै सेयर उठाउन सक्नेगरी आवेदन हालेको छ। कोषले साधारण समूहतर्फको शेयर प्रतिकित्ता …
कैलाश विकास बैंकको १७ प्रतिशत नगद लाभांश पारित
बैंकिङ खबर । कैलाश विकास बैंकको २५औँ बार्षिक साधारणसभा आइतबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । बैंकका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा भएको सभाले शेयरधनीलाई प्रस्ताव गरिएको १७ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय पारित गरेको बताइएको छ । गत आ.व. २०७४/७५ को …
सेयर बजार ७.२२ अंकले घटेर १,१७०.७९ अंकमा कायम
बैंकिङ खबर । आइतबार सेयर बजार ७.२२ अंकले घटेर १,१७०.७९ अंकमा कायम भएको छ । अन्य बाहेक सबै उपसुचक घटेका छन् । सबैभन्दा धेरै निर्जीवन बीमा समुह ७९.०८ अंकले घटेको छ । दिनभरिमा १५६ वटा कम्पनीको १३ लाख ६३ हजार …
प्रभु बैंकको १०.२६ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
बैंकिङ खबर । प्रभु बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको पुस २२ गते बसेको संचालक समिति बैठकले सेयरधनीलाई १०.२६ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । बैंकको प्रस्ताव अनुसार सेयरधनीले पाँच प्रतिशत बोनस सेयर …
कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको ११.२९ प्रतिशत लाभांश पारित
बैंकिङ खबर । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ११.२९ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकको नवौं बार्षिक साधरण सभाले चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशत बोनस सेयर र ६.२९ प्रतिशत नगद लाभांश प्रदान गर्ने निर्याय पारित गरेको छ । साथै, …
साताभर शेयर बजार ३६.२ अंकले घट्यो
बैंकिङ खबर । शेयर बजारमा यो साता परिसूचक नेप्से घटेको छ । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएपनि कर्जामा अझै नघटाउँदा लगानीकर्ताले कारोबार बढाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा शेयरको विक्रीचाप उच्च भएका कारण नेप्से दवावमा परेको हो । शेयर बजारमा यो …
सेयर बजारमा उतारचढाव किन? ब्याजदर मुख्य कारण
बैंकिङ खबर । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर बजारमा अधिक प्रभाव छ । यसको मुख्य कारण नेप्सेमा सुचिकृत सेयरमध्ये करिब ८० प्रतिशत सेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुनु हो । त्यसैले बैंकमा हुने गतिविधिका कारण नेप्से परिसूचकमा उतारचढाव हुँदै …
सेयर बजारमा १.५६ अंकको गिरावट, २७ करोमाथिको कारोबार
बैंकिङ खबर । विहीबार सेयर बजार १.५६ अंकले घटेर १,१७८.८७ अंकमा कायम भएको छ । बैंकिङ, विकास बैंक र हाइड्रोपावर बाहेक सबै उपसुचक बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै जिवन बीमा समुह ६८.०५ अंकले बढेको छ । दिनभरिमा १५८ वटा कम्पनीको …
घलेम्दी हाइड्रोको १५ लाख ३३ हजार कित्ता आईपिओ खुल्यो
बैंकिङ खबर । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा आयोजना स्थल रहेको घलेम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाले १५ लाख ३३ हजार ७ सय ७० कित्ता साधारण सेयर (आइपिओ) निष्काशन गरेको छ । विक्री प्रबन्धक भिबोर क्यापिटलको अनुसार आइपिओ छिटोमा २३ पुुष र ढिलोमा १८ …
आयोजना प्रभावितकालागि आइपिओ जारी गर्दै शिवश्री हाइड्रोपावर
बैंकिङ खबर । सिन्धुपाल्चेकमा निर्माणाधिन आजोजना प्रभावितको लागि शिवश्री हाइड्रोपावर कम्पनीले पुस २७ गतेदेखि आइपिओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले १४ लाख ७६ हजार चार सय कित्ता प्राथमिक सेयर निष्काशन गर्ने भएको हो । कम्पनीले ३६ लाख ९१ हजार कित्ता …